စင်္ကာပူရှိ FBS ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ ကြိုဆိုပါတယ်!
ကျွန်တော်တို့ ပါတနာများမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုအင်အားကြီးလာစေပြီး၊ အဲ့အတွက်လဲ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းသည် တကယ်တမ်း သူတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့၏ အချစ်နှင့် လေးစားမှုကိုပြသရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအနေများကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် - ဆွဲဆောင်ပြီး၊ ဖောက်သည်များကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်အောင်လုပ်ကာ၊ သူတို့ကို ရောင်းဝယ်ပြီး၊ အမှတ်များစုဆောင်းရန် အားပေးပါ။
အမှတ်များများ ရလေ၊ စင်္ကာပူ၊ Sentosa ကျွန်းဆွယ်ကိုသွားရောက်ရမည့် ထိပ်တန်း ပါတနာ ၂၅ဦးထဲတွင် ပါဝင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးပိုကြီးလေပါပဲ!
ဒီစိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံပြီး၊ သင်ဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲ ပြသရန် ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါတယ်! အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပြီး၊ FBS ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ သင့်နေရာယူလိုက်ပါ - ၄ရက်တာ ပါတီပွဲနှင့် ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးတွင် အပန်းဖြေခြင်း၊ FBS ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများနှင့် အစည်းအဝေး - ထိုက်တန်ပါတယ်! အံအားသင့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်အကြောင်းပိုလေ့လာပြီး၊ ပြိုင်ပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန်၊ အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။